Kristof Dyugarri - legend of the "Bordeaux"
Kristof Dyugarri - a Umgadli enamandla kakhulu ngesikhathi sakhe, okuyinto kuyingxenye umxhwele kwenkonzo yakhe wayichitha club lwakhe "Bordeaux". Kungaleso sikhathi kuphela lapho eqala zama amaqembu amasha, kodwa ungalokothi zase zihleliwe njengoba eqenjini lakhe lokuqala. Yayiyini indlela umsebenzi owawuphambi Kristof Dyugarri, owaqeda inkambo yakhe eminyakeni engaphezu kweyishumi edlule?
Ikhaya club "Bordeaux"
Kristof Dyugarri wazalwa Mashi 24, 1972 futhi manje ngase Academy of the club "Bordeaux" zisencane sasivumela ekuseni. Lapho ngineminyaka engu-18, naye usayine inkontileka professional nethimba, kodwa njalo ukuze isenzo kwaqala ngokushesha. Ngoba kuqala zonyaka ezimbili, wayedlala midlalo emibili kuphela, bese abaneminyaka 21, iwine isihlalo isisekelo - ayihlala 38 imidlalo embalwa eqenjini lakhe, kodwa ekugcineni wakwazi ukubuyeka lokushaya amagoli amane kuphela. Leyo nkathi yaba inhlekelele hhayi kuphela Christophe, kodwa club - "Bordeaux" limane lifakwe besigaba sesibili, futhi abadlali zama okusemandleni ami ukuze ubuyele Izilimi enkulu. Baphumelela, futhi kuze 1996, Kristof Dyugarri wachitha ezine zonyaka in the "Bordeaux" njengoba lo mgadli main futhi yabakhanga amaqembu esihamba phambili emhlabeni. I beshesha kakhulu Italian "Milan", okuyinto wasayina mdlalo oneminyaka engama-24 ubudala, eziyisithupha kanye euro sesigidi.
Inguquko ukuba "Milan"
Nokho, e-"Milan" Kristof Dyugarri, izithombe zazo kwaqala ukuvela zonke omagazini football, ngeshwa, akazange adlale - akakwazanga abonisa ukuthi ukusebenza efanayo, okuyinto wayedume ukusebenza kwakhe ngo "Bordeaux", ngakho ngemva nje konyaka iye ethengiswe "Barcelona "i-abayizigidi ezine.
Kodwa Catalonia icala engumFulentshi ladilis - wacishe abakutholanga umdlalo umkhuba, ngakho akahlalanga club entsha ngisho kangaka njengoba ungene "Milan". Ebusika 1998 Biography ngoChristophe Dugarry wathatha ube esejika - futhi umdlali waphindela kwelakubo, France. Kuphela manje Wayeseqala ukukhuluma hhayi "Bordeaux" futhi "Marseille", ababekhokhela yakhe euro emihlanu nengxenye million.
izimbali ezintsha "eMarseilles"
Phakathi neminyaka emibili ayihlala e-"eMarseilles", mdlalo oneminyaka engama-26 ubudala, wakwazi ukuphinde alungise enkazimulweni yayo yangaphambili futhi uqale beshaya inombolo ezanele amabhola futhi zidonse ukunaka kwanoma umphakathi. Yiqiniso, wafika evela e-"Barcelona" iwine iNdebe iSpanishi, kodwa "eMarseilles," waqala ukudlala bahlaba umxhwele nakakhulu, ngisho noma kuhlulekile ukuwina indondo olulodwa.
Ubusika 2000 lifezekile, "ukubuya wendodana yolahleko" - Kristof Dyugarri kwezigidi eziyisithupha euro abuyele kwakhe club. Lapho, ngokushesha ngasibuyisela esikhundleni sakhe ngasesinqeni futhi waqala lokushaya amahle umxhwele, futhi okubaluleke - imigomo ewusizo. Ngezindlela eziningi, ngosizo "Bordeaux" wafumana French League Cup ngo-2002. Nokho, Christophe waphenduka imashumi mathathu ezelwe, futhi wayengasakwazi ezineminyaka ababenawo. Ngakho-ke, ebusika 2003, walihamba izinyanga eziyisithupha ukuqasha ngesiNgisi "Birmingham".
Ngemva kokuphothulwa ukuqasha in the "Birmingham" Dugarry wasala ngaphandle club kuze 2004, akazange enze inkontilaka yonyaka oyedwa nge club Qatari "Qatar". Lapho kudlalwa kuze February 2005, wabe esememezela umhlalaphansi wakhe. Futhi ake Christophe ezingeni club ayizange baphumelele kakhulu, ukuthi sasiyingxenye iqembu France ukuthi iwine i-1998 World Championship, futhi ngo-2000 - Championship European.
Ukudlala ethimbeni French kazwelonke
Dugarry seziqalile ukusetshenziswa wakhe iqembu French sakhiwa ngo-1994 eneminyaka engu-22 ngendlela enobungani ngokumelene Slovenia. Wabizwa ukuba Championship European ngo-1996, lapho waqhubeka emkhakheni njalo umdlalo esiteji iqembu. On the World Cup yokunqoba, wayedlala 90 amaminithi kuphela esigabeni iqembu nasesikhathini sokugcina imizuzu amabili. Ngesikhathi 2000 Championships European Dugarry ngokuvamile ngakwesokunxele isizinda kanye esikhundleni, Dutch amaphuzu umgomo umdlalo iqembu esiteji. A Cup 2002 World Wagcina ngoba Christophe - emva Ukuhamba French kusukela iqembu, wamemezela isikhathi sakhe sokuthatha umhlalaphansi eqenjini.
Francesco Toldo: Biography, umsebenzi kanye nezithombe
Bome Mertens - omunye wabadlali ziwusizo ikakhulu Belgian
Uma amazinyo akho ubuhlungu ngesikhathi esisodwa, kungaba nguyiphi?
Ungasusa kanjani ukugqwala emzimbeni wemoto? Ukwelashwa okungahambi kahle